Trump oo ku biiray weerarka Ilhan Omar iyo Taageerayaasha Xildhinaanada oo sii xoogeystay (DAAWO) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Trump oo ku biiray weerarka Ilhan Omar iyo Taageerayaasha Xildhinaanada oo sii xoogeystay (DAAWO)
Trump oo ku biiray weerarka Ilhan Omar iyo Taageerayaasha Xildhinaanada oo sii xoogeystay (DAAWO)
February 13, 2019 - By: Khalid Yusuf
Xiisada ka dhalatay cambaareynta Xildhibaanad Ilhan Omar la beegsatay kooxaha u ololeeya Israel iyo weerarka ay taageerayaasha Israel iyada la beegsadeen ayaa keentay dood xoogan iyadoo ay shacab badan ku taageereen Ilhan hadalkeeda isla markaana qireen awooda Israel ku leedahay Maraykanka oo hada su’aalo badan la iska weydiinayo.
Siyaasiyiinta labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuquraadiga oo ay Ilhan kamid tahay oo ay wehliyaan Warbaahinta waaweyn sida CNN & Washington Post ayaa iyagu ku eedeeyey erayada Ilhan adeegsatay ay yihiin kuwo ay ka muuqato Yuhuud-naceyb. [Halkan ka akhriso qaabkii ay xiisadan ku bilaabatay].
Jawaabtii Ilhan iyo raali gelinta ay ka bixisay ayaa ahayd mid ay si xirfadeysan ugu jawaabtay kuwa ku eedeenaya inay Yuhuuda necebtay, Xildhibaanad Ilhan ayaa sheegtay in ay raali gelin ka bixineyso sida khaldan ee ereyadeeda loo fasiray balse ay ku taagan tahay cambaareynta ay u jeedineyso kooxaha u ololeeya Israel.
Trump oo isaguna ku biiray weerarka Ilhan Omar ayaa ku baaqay inay Xildhibaanada xilka iska casisho ama aysan kamid noqon guddiga Arrimaha Dibada ee Baarlamaanka.
Hase yeeshee xiisadan ayaa dhalisay in dad badan ay taageero u muujiyaan Ilhan Omar kuwaasi oo ay ku jiraan Yuhuud badan iyagoo sheegay in ay xildhibaanada ka hadashay xaqiiqda jirta oo ay inta badan ka cabsadaan inay siyaasiyiinta kale ka hadlaan, taasi oo ah awooda ay Israel ku dhex leedahay Baarlamaanka iyo dowlada Maraykanka.
Doodan ayaa dib usoo nooleysay dood adag iyo su’aalo badan la iska weydiiyo Awooda xad dhaafka ah oo ay Israel ku leedahay dowlada Maraykanka iyo Siyaasiyiinta xilalka sare haya.
Waxay doodan sidoo kale banaanka usoo saartay kala fogaanshaha weyn ee u dhaxeysa Dhalinyarada Maraykanka ee hada siyaasada soo galay oo taageersan Ilhan iyo Siyaasiyiintii hore ee xiriirka dhaw laleh Israel.
Daawo dooda Ilhaan ee ka socota Maraykanka: